Ileeyn Ragga qaar hadeey xil qabtaan Tuuganimo iyo Ballan la’aana waa isku darsan karaan=Nasashada Jimcaha.Q-155aad= | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA SOOMAALIYA Ileeyn Ragga qaar hadeey xil qabtaan Tuuganimo iyo Ballan la’aana waa isku...
Ileeyn Ragga qaar hadeey xil qabtaan Tuuganimo iyo Ballan la’aana waa isku darsan karaan=Nasashada Jimcaha.Q-155aad=
1- Dhalinyaro Daljoog ah ayaa Gaalkacyo ka furtay Dugsi lagu barto Luqadda Ingriiska. Muddo kadib ayaa wiil Qurba joog ahi ka furtay Magaalada Dugsi kale. Ardaydii oo dhan waxa ey aadeen Dugsigii Cusbaa ee Qurba jooga.
Waxana soo jiitay Ardayga Dugsiga oo Boorkiisa ey ku qorneyd: Deg deg ugu baro Af ingriiska, “ Quick English of Galkacyo” . gudaha waxaa ku qoran Tarjumida Luqadda iyo maahmaahda. Naag Nin ka weyn ayaa dhaqi karo “Old man can wash a woman”. ( F.S: 5 aad)
(Ogoow: Qurba joogta qaar ayaan aqoon Af Ingriiska , wax barashada Dibaduna kama tayo fiicno tan gudaha)
2- Wiil ayaa saaxiibkii ku yiri: Gabadhii aan isguursan rabnay waan kala harnay, kadib markii ey iga diiday, Horteyda in ey wajiga saabuun isaga dhaqdo ama ku weysa qaadato.
Saaxiibkii ayaa yiri: Gabar aad arki jirtay marka aad ballantiin iyo iyada oo Saloon ka timid oo kaliya , waad ku siran tahay, ee u tag gurigooda iyada oo Jimcaha Duhurkii gambar ku fadhido oo dhar dhaqee, si aad u ogaato muuqaalkeeda dhabta ah.
(Somalidaa tiraa Saddax orod laguma gaaro: Gabar Make up marsatay, ee aragtay Roob soo socdo, Nin guriga ku soo hilmaamay Mobile –kiisii oo aan Fura sireed leheyn, soona xasuustay in Xaaskiisii ay guriga joogtay, Musharax la yiri: Ergadii Hotelka kuugu xareysneed, waa lagaa wadanayaa) ( F.S: 1aad)
3- Nin ayaa Naag ey Caruur isku lahaayeen oo uu furay, ayaa Qurbaha ka soo noqotay. Qaraabadii ayaa ku tiri: War Faaraxoow, Xaliimo oo qurxoonaatay ayaa Qurbaha ka soo Noqotay ee isku noqda , waxa uu yiri: Waxaan guursaday Gabar kale ee ma waxaad igula talineysiin: Haddii dugsigii hoose ee aan ka soo baxay la dayac tiro, in aan jaamacadda ka tago oo aan dib ugu noqdo Dugdigii hoose.
( Qurbuhu Qof ma bedelo ee Qooyska Dambe yaan la kala dirin, Faaraxna dib loo celin)
4- Nin Nabadoon beeleed ahaa ayaa Lacag xaaraan ah Gabdhiisii Qurbaha ugu diray, xiriirkii ayey u jartay. 10 Sanno kadib ayey soo noqotay. Waxa ey ku tiri: Aabe caasi ayaan noqday ee ii duceey hadda waan ka tooba keenay .
Waxa uu yiri: 10kaa sanno xageed ka shaqeyneysay? Waxa ey ku tiri: Jirkeyga ayaan ka ganacsanayay. Waxa uu ku yiri: bax, bax, mar dambana Wajigeyga ha imaan. Iyada oo ooynee ayey ku tiri: Aabe inta aanan bixin i weydii maxaan u imid, Aabe waxaan wadaa hal million iyo bar Dollar, Halka Million Adigaa leh, barkana Hooyo, waxaana rabay in aan Xajka idiin wado .( F.S: 2aad)
Aabihii ( Nabadoonkii) ayaa yiri: dhaga fiican malihi ee maxaad i tiri, waan ka shaqeyn jiray? Waxa ey tiri: Jirkeeyga ayaan ka ganacsan jiray. Waxa uu yiri: waxaan u maleynayay in aad i tiri: Jalaataan ka ganacsan Jiray, Jalaatadaan necebahay.
( Nabadoonoow, Go’aan yeelo, Alla ka cabso, La jiifiyaa ma banaano, wixii aad Qabiilka ku dhaqeysay, miyaad Qooyskaagana ku dhaqee?)
5- Tuug ayaa Habeen u soo galay Naag kaligeed Guri Jiifto. Waxa uuna ku yiri: Haddii aad Qeyliso ogoow waan ku kufsanayaa.
Naagtii ayaa qeylisay, Tuugiina waa cararay. Waxa ey ku tiri: waryaa Tuuganimada ileeyn Been ayaad ku darsatay oo Ballan malihid. ( F.S: 3aad)
( Ileeyn Ragga qaar hadeey xil qabtaan Tuuganimo iyo Ballan la’aana waa isku darsan karaan)
6- Nin Qurba joog ah ayaa waxa uu maqlay Saaxiibkii oo Madax sare noqday, waa u yimid waxa uuna ku yiri: Saaxiiboow iga dhig wasiirka Dayax gacmeedyada Dalka. Masuulkii ayaa yiri: oo ma magac wasiir oo kaliya ayaad rabtaa, maba jirto hayad dayax gacmeed.
Saaxiibkii ayaa yiri: Mudane, wasaarada badan oo magac ahba waa jiraan, ,Wasaaraddaha Caafimaadka, Amniga Guduha iyo Dastuurkuba waa jiraan. ( F.S: 4 aad)
( Magacaabidda Maamul ha lagu daro)